क्यान नभएकाे बेफाइदा हरेक कुरा एसीसीमा भर पर्नु पर्ने वाध्यता : प्रशिक्षक दास | | Neplays.com
क्यान नभएकाे बेफाइदा हरेक कुरा एसीसीमा भर पर्नु पर्ने वाध्यता : प्रशिक्षक दास
यू-१९ एसिया कप क्रिकेट प्रतियाेगिताका लागि नेपाली टिमले अनाैपचारिकरुपमा प्रशिक्षण शुरु गरेकाे छ । १ तारिखदेखि नै प्रशिक्षण थाल्ने याेजना बनाए पनि एसीसीबाट स्वीकृती १२ तारिखदेखि गर्ने गरि आएकाे छ ।
नेपाली टिमका प्रशिक्षक विनाेद दासले नेपाल क्रिकेट स‌ंघ क्यान निलम्बनमा परेकाले यसकाे असर प्रशिक्षणमा परेकाे पनि बताए । उनीसँगकाे कुराकानीकाे सम्पादित अ‌ंश ।
यू–१९ एसियाकपका लागि हामीले पहिला नै क्याम्प राख्ने तयारी गरेका थियौं । तर एसीसीबाट १२ तारिखदेखि क्याम्प राख्न भनेर अनुमति आएको छ । औपचारिकरुपमा १२ तारिखदेखि शुरुहुने भए पनि अहिले हामीले काठमाडौंमा रहेका खेलाडीहरुलाई बोलाएर प्रशिक्षण शुरु गरेका छौं । धेरै जसो खेलाडीहरु काठमाडौंमा रहेका छन् । उनीहरुलाई विहीबारदेखि फिटनेस र फिल्डिङ ट्रेनिङ गर्न शुरु गरेका छौं ।
एसीसीको स्वीकृति नलिई क्याम्प राख्न हुन्छ त?
हामीले एसीसबाट लिनु पर्ने स्वीकृत भनेको के हो भने हामीलाई बजेटसँग सँगै सामाग्रीका लागि हो । यो क्याम्प राख्नका लागि बजेटको आवश्यकता नपर्ने भएकाले हामीले शुरु गरेका हौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपलाई यस विषयमा जानकारी गराएका छौं । यो हाम्रो आन्तरिक क्याम्प हो । त्यसैले गर्दा स्वीकृती आवश्यक नपरेको हो ।
१२ तारिखदेखि औपचारिक क्याम्प शुरु हुन्छ । यहाँ १० दिन प्रशिक्षण गरेर नेपाली टिम २४ तारिखमा श्रीलंका जान्छ । त्यहाँ नेपालले तीन वटा जति अभ्यास म्याच खेल्ने सेडुयल तय गरेका छौं ।
किन हामीले गरेको एप्रोच एसीसीबाट एप्रुभ हुँदैन?
एसीसीले नेपालबाहेक अरु पनि देशको क्रिकेट हेर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि बजेटको कुरा पनि हुन्छ । एसीसीले भारत गएर अभ्यास गर्नुको साटो एक हप्ता अगाडि नै श्रीलंका गएर अभ्यास गर्नुस भन्नुभयो । एसीसीले भनेको कुरा हामीलाई राम्रो लाग्यो । यस्तो भयो भने पहिला अभ्यास खेल पनि एसीसीले म्यानेज गर्छ । हामीले यहाँ वर्षाको सिजन भएकाले यहाँ क्याम्प लगाउन अलि अप्ठेरो परेको हो ।
तपाई हामीलाई थाहा नै छ यहाँ क्रिकेट बोर्ड नहुँदा समस्या भएको हो । यस विषयमा नेपाली खेलाडीहरुलाई त टाढै राखेका छौं । यहाँ बाट गर्नुपर्ने विषयमा म एउटा प्रशिक्षकको नाताले यसका लागि एसीसीसँग समन्वय पनि गरेको छु । यसैगरी भावना घिमिरेले पनि यसमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ । यू १९ टिमका खेलाडीहरु नियमितरुपमा प्रतियोगिता खेलिरहका छन् । घरेलु क्रिकेटको साथै तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता खेलिसकेका छन् । तर एसिया कप भनेको टेस्ट नेशनसँग खेल्नु पर्ने भएकाले यसका लागि तयारी गर्नुपर्छ । त्यसैलाई टार्गेट गरेर भारत वा अन्य कुनै देशमा गएर क्याम्प राख्न खोजका थियौं । यसमा सफल नभए पनि यहाँ हुने क्याम्पलाई अझै फ्रुट फुल बनाउने योजनामा छौं ।
अहिले प्रशिक्षक भनेको सबै जिम्मेवारी हो ?
हो पनि । अहिले बोर्ड भएको भए हामीले अनुमति माग्नु भन्दा पनि जानकारी गराए मात्र पुग्ने थियो । नेपालको सन्दर्भमा आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिएन भने गाह्रो हुन्छ । मैले बारम्बार भनिरहेको छु की हाम्रो योगदान पर्याप्त छ की छैन । मेरो योगदान पर्याप्त नभएर अरुतिरबाट पनि प्रयास गरिरहेको अवस्था हो । मेरो सोँच के हो भने जस नपाए पनि अपजस नपाऊँ भन्ने नै हो ।